Cuntooyinkaan uma baahna inaad talaajada (qaboojiyaha) ku keydiso. Wax ka ogoow cuntooyinkaas. – Filimside.net
Cuntooyinkaan uma baahna inaad talaajada (qaboojiyaha) ku keydiso. Wax ka ogoow cuntooyinkaas.
Si aan cuntooyinka u keydsano waxaan inta badan gashanaa talaajada ama qaboojiyaha si aysan cuntada u halaawin ama isku badalin, hase yeeshee waxaad ogaataa in cuntooyinka qaar aysan marnaba u baahneyn inaad qaboojiyaha ku keydsato xili qaarkood aad ku keydsan karto heer kul caadi ah.
Halkaan hoose waxaan idinkugu soo qori doonaa qaar kamid ah cuntooyinkaas aanan qaboojiye kaaga baahneen sida ay qortay Foodnetwork.
Maadaama uu dareere yahay malabka waxaa la sheegaa in xitaa uu yaali karo qarniyaal mana u baahna qaboojiye iwm iyadoo malabka sida aan wada ognahay uu yahay daawo Alle quraankiisa noogu sheegay hadana malabka waa cuntada kaliya ee aduunkaan guudkiisa saaran taasoo aanan marnaba qurmin.
2-BASASHA IYO BARADHADA.
Waa muhiim in khudaarta sida basasha iyo baradhada lagu keydiyo meel qalalan oo nadiif ah taasoo macnaheeda uu yahay in aysan u baahneyn qaboojiye waayo hadii uu qabowga iyo qoyaanka gaaro waxay u nugulyihiin iney halaabaan sidaas owgeed meel heer kulkeeda caadi uu yahay qoyaana laheyn ayaa lagu keydiyaa basasha iyo baradhada.
Lkn ogoow kuna dadaal in aadan labadooda hal jawaan ama hal weel ku keydinin waayo wey halaabayaan.
Qaxwada waxaa la xifdiyaa iyadoo afka ka xiran mana fiicna in ay leer ama aaryo kaa gasho waxaana lagu keydiyaa meel aanan qaboobeyn oo heer kulkeeda caadi yahay, hadiise ay dhacdo in qaboojiye la galiyo qaxwadaas wey dhadhan beeleysaa mana ahaaneyso sideedii hore.
Sidaas owgeed qaxwada iyadana qaboojiye uma baahna.
4-MUUFADA ROOTIGA IWM.
Dadka qaar ayaa laga yaabaa in rootiga ay ku keydsadaan qaboojiyaha hase yeeshee waxaa waxbadan ka roon kana fiican inaad sidiisa ku dhaaftid isla markaasna meel heer kulkeeda caadi yahay ku keydsatid waayo hadii aad qaboojiye galisid wuxuu 6 jibbaar qaleyl ahaanta ka darnaanayaa rootiga aanan qaboojiyaha la galinin.
Waxaa Aqrisay 381